Thursday August 20, 2020 - 06:38:23 in Wararka by Super Admin
Maanta oo Khamiis ah 20,Agoosto,2020 waxay ku beegantahay 1,1,1442 Hijri waxaana muslimiinta usoo galay sanad cusub kadib markii ay dhameysteen sanaddii 1441 Hijri.
Sanadkan cusub ee Hijriya ayaa muslimiinta u ah bishaaro wuxuuna sanadkan imaanayaa xilli mujaahidiinta caalamka ay guulo ballaaran kasoo hooyeen halgankooda ku aadan dib usoo nooleynta khilaafadii islaamka ee burburtay.
Muslimiinta Afghanistan sanaddan 1442 Hijri inta lagu guda jiro ayay ka xuroobi doonaan gumeystaha shisheeye ee wadankooda duullaanka ku qaaday 18 sanadood ka hor, Muslimiinta Yemen waxay kuguda jiraan kifaax iyo halgan ka dhan ah shiicada xuuthiyiinta iyo wakiillada Mareykanka.
Muslimiinta Soomaaliya sanadkan cusub ee Hijriga wuxuu imaanayaa xilli mujaahidiintoodu ay cadaw jinsiya kala duwan leh lahalgamayaan ayna guulo muuqda ka gaareen halgankooda gumeysi diidka ah.
SomaliMeMo: Allaah waxaan ka baryaynaa in inta sanadkan 1442 Hijriya lagu guda jiro uu dalkeena Soomaaliya nooga xureeyo gumeystaha